Raaxo waxyaabaha udugga leh Black Shumaca Jar Iyadoo udugga Wax - Design fiican & Sameeyo Co., Ltd
ESIGN – Our raaxo Silver waxyaabaha udugga leh Shumaca dabool waa sidaas oo gaar ah oo muddo dheer socota, waa inuu noqon doono hit ah ee gurigaaga ama ganacsiga. • SAAFI AH – 100% Saafi ah horyaalka koray Soy Bean Wax – Free ka Kiimikada, doogga, waxaa AAN siibtey iyo Kosher Ruqsado. • DEEGAAN – cusboonaysiin karo & Baaba'aysa isticmaalaya ah maaddooyinka ugu sarreeya-Quality. • OF FREE – Petroleum, Palm, Shito By-Products, formaldehyde, lagu daro, jilciye, Parabens, Cayayaanka iyo doogga, hubinta nadiif ah, opti ...
ESIGN – Our raaxo Silver waxyaabaha udugga leh Shumaca dabool waa sidaas oo gaar ah oo muddo dheer socota, waa inuu noqon doono hit ah ee gurigaaga ama ganacsiga. • SAAFI AH – 100% Saafi ah horyaalka koray Soy Bean Wax – Free ka Kiimikada, doogga, waxaa AAN siibtey iyo Kosher Ruqsado. • DEEGAAN – cusboonaysiin karo & Baaba'aysa isticmaalaya ah maaddooyinka ugu sarreeya-Quality. • OF FREE – Petroleum, Palm, Shito By-Products, formaldehyde, lagu daro, jilciye, Parabens, Cayayaanka iyo doogga, hubinta nadiif ah, si mug leh xitaa gubi. • handmade – Shumac waxaa gacanta lagu dhigay iyo gacan-ku shubtay. Waxaan loo hubiyo in dhammaan qaybaha yihiin si masuuliyad illaha iyo kulmi heerka ugu sareeya.
size Box:L8.2 * W8.2 * H9.5cm
1pc muraayad madow haysta shumac(D7.3 * H8cm) la daabaco dahab Xariir iyo 100% wax la shito,1pc cap biraha(D7.8 * H1cm),wax miisaan 160g la 3% udgoonkii.
Xidhmada:350sanduuqa waraaqaha g la shiilay oo dahab ah Rose jediyay.
badeecadaha la xiriira kala duwan ee aad dooratay. Waxaa had iyo jeer waa item kulmi kartaa dhadhan.
1.Glass waxyaabaha udugga leh Shumaca
2. Dhoobada waxyaabaha udugga leh Shumaca
3. Birta waxyaabaha udugga leh Shumaca
6. Daboolada shumac
7. hoggaamiyo Shumaca
Waa maxay sababta Us Chooes
"Fursada A for Labada of Us"—Iyada oo waayo-aragnimo qani ah, waxaanu ku siin karaan wth tayo sare leh iyo adeegga kaamil ah.
Design fiican& Manufacturer Co., Ltd www.outstandingdm.comtop 1 Carafta leh Shumaca Factory. Pls nala soo xiriir: Alice @ outstandingdm.com
Certificates CE, RoHS, PSE, ETL, FCC, iwm
Main Suuqyada America, Europe, Australia, Bariga Dhexe iyo Koonfur-bari Eeshiya
faa'iidooyinka Design fiican 10 waxyaabaha cusub ee toddobaadkii
Adeegga fiican 24 adeegga macaamiisha saacadood, waad nala soo xiriiri kartaa waqti kasta: Alice @ outstandingdm.com
Tayada Outstand Tayada waa nafta ganacsi. Dhamaan badeecada waa in ay noqdaan 100% kormeerka
Kooxda fiican Time waa dahab annaga iyo idinka. La shaqaynta fiican, sameeyaan wax walba oo sahlan
line-soo-saarka adag si ay u bixiyaan alaabta tayada hiah a, Adeega Afcelinta wanaagsan,
shumac carafta kala duwan farshaxanka dhameysatay , doorashooyin kala duwan oo aad loogu talagalay.
Beautiful, gaar ah, kartoo, waxaan u samayn karaa sanduuq hadiyad habka kuu, haddii aad rabto…
waxyaabaha Our gudbin kartaa testings sida aad u baahan tahay, tus: CE, RoHS, PSE, ETL,FCC, iwm.
Waxaan nahay mid ka mid ah kuwaas oo ku siin kara SHAN adeegga macaamiisha STAR. iibka Your la kordhin doonaa by30% -50% by la design OUTSTNADING shaqeeya
•Waxaan nahay soo saaraha ah, bixinta OEM & adeegga ODM.
•Japan, Germany, France, USA iyo Italy, iwm.
•Sida caadiga ah ku saabsan 1-3 maalmood waxyaabaha shuruudaha guud.
•Haa, Cuntooyinkan gudbin karaan testings sida aad u baahan tahay, tus: CE, RoHS, PSE, ETL,FCC, iwm.
•Waxaan xakameeyo tayada wax soo saarka by IQC ah, Sadex baaritaan ku saabsan khadadka-soo-saarka, iyo 100% gaboobaya imtixaanka ka hor baakooyinka.
•Hadda waxaan u codsato ISO 90001 iyo idlaan doonaan ISO in saddex bilood.
•MOQis 500PCS, laakiin 1000 kumbiyuutarada for moodooyinka cusub. Dabcan, waxaan aqbali karin amar maxkamad yar oo waxyaabaha qaarkood.
•Q7. waxaad na siin kartaa dhimis wanaagsan ?
•Dabcan, dhimis wanaagsan loo soo bandhigi doonaa haddii tirada waa galay Robben.
•Q8. Sidee baad markab alaabo iyo intee in leeg ayay qaadan?
•Waxaanu badanaa markab by oogeen, UPS, FedEx,TNT. Waxay caadi ahaan qaadataa 4-5daysto yimaadaan. by hawada,bysea sidoo kale waa la aqbali karo.
Dhimatay Rose Glod waxyaabaha udugga leh Shumaca